musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » World Tourism Network Kuona nezve Tourism uye Ugandanga
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • LGBTQ • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau • Wtn
by Chiremba Peter E. Tarlow
11 min kuverenga
rakanyorwa Chiremba Peter E. Tarlow
Mhirizhonga yanhasi uye kurwiswa kwekutyisa pa
Hamid Karzai International Airport muKabul, Afghanistan neBaron Hotera iri padyo mutambo wekuchinja mutambo zvakare kune iyo yatove isina kusimba yepasirese Kufambisa neKushanya Indasitiri.
Mutungamiri weWorld Tourism Network Dr Peter Tarlow vanopa gwaro nemaonero avo.
Kurwiswa kwemazuva ano muKabul, Afghanistan zvakare kurwisa kweWorld Tourism.
Iyo Nyamavhuvhu 26th kurwiswa kwevagari vengarava yeKabul vanoedza kuenda kuAfghanistan kunoshanda sechiyeuchidzo nezvekuti mamiriro ezvinhu ane njodzi sei muAfghanistan.
Nezuva rekupedzisira rekubva kweUS uye vabatsiri vayo kubva munyika iyoyo iri kusvika nekukosha zvakakosha kuti vashandi veindasitiri yekushanya vatore mweya uye vafunge nezve zvinogona kuitika mukukunda kweTaliban pasirese yekushanya.
The World Tourism Network inonzwa kuti zvakakosha kune ino chikamu chepasirese kuti isadzivirirwe nekuvandudzwa kwepasirese kwazvino pa COVID, Shanduko Yemamiriro ekunze, uye kutyisidzira kwekutyisa.
WTN Mutungamiri Dr. Peter Tarlow anozivikanwawo chengetedzo nekuchengetedza nyanzvi muindasitiri yekufamba neyekushanya anonyora kuti:
Tourism haina kupatsanurwa kubva kumatambudziko mazhinji aripo epasi rose
Kunyangwe paine pachave nezvakawanda zvinyorwa zvine chekuita nekutorwa kweTaliban kweAfghanistan zvakanyorwa kubva mumaonero ezvematongerwo enyika kazhinji hazvigone kupatsanura nyika yezvematongerwo enyika nezvenyika yekushanya. Semuenzaniso, kurwiswa kweAl Qaeda munaGunyana wa2001 kwaive kuita kwezvematongerwo enyika, asi mhedzisiro yacho yaive hupfumi hwekukasira uye indasitiri yekushanyirwa ichiri kunzwa makore makumi maviri gare gare kudzokororwa kwaGunyana 11, 2001. Gunyana 2021 haingotarise makore makumi maviri kubva kurwiswa uko kunodaidzwa zvakare kunzi 9-11 (Gunyana 11th) asi kwayedza yenguva inogona kuve nyowani uye ine njodzi kune nyika yekushanya.
Hapana anoziva kuti nyika yekushanya ichataridzika sei mumwedzi mitanhatu, gore, kana makore maviri kubva zvino. Iyo indasitiri yekushanya inogara iri panjodzi yezviitiko zvisinga fungidzike kana zvisingafanoonekwe zvematongerwo enyika kana zvehupfumi izvo zvinowanzo kunzi zviitiko zve "black swan".
Sezvo kutaurirana kwepamberi kunoita kuti zviite kunge nyika inoramba ichingori diki, uye zviitiko zvinozikanwa kutenderera pasirese nguva pakarepo zvinoita sekunge kune huwandu hwezviitiko zvevatema swan zvinowedzera nenguva.
Izvi zviitiko zvinowanzo shandura sarudzo dzedu dzekufamba, zvese zvekunakidzwa uye zvebhizinesi. Vatariri vezvekushanya vanofanirwa kugara vachiziva kuti mafambiro enhoroondo haasi zviitiko chimwe chete, asi poto yezviitiko. Zvinoshamisa kuti izvi zvinosanganiswa zvinoita sezvisingaitike zvisati zvaitika asi kana zvamboitika zvinoita sekufunga kwekupedzisira kuti ndizvo zvakazoitika.
Zviitiko zvekupera kwezhizha ra2021 zvinoratidzira izvi zvakasarudzika zvezviitiko uye kubva mukushanya, maindasitiri maonero anoda kuongororwa kunofungidzirwa. Kunyangwe ndiri kunyora chinyorwa ichi kubva kuUnited States maonero, muchokwadi, mazhinji eaya enhoroondo enhau anokanganisa iyo indasitiri yekushanya yepasirese.
Zhizha ra2021 rakazadzwa nematambudziko matsva uye asina kugadziriswa. Semuenzaniso, indasitiri yekushanya yaive netariro kuti pakupera kwezhizha remuchadenga iro iro COVID-19 denda raizove rave chikamu chenhoroondo pane kuramba kuri dambudziko.
Iyo Delta Variant ye COVID denda yakapedza iyo tariro.
MunaAugust wa2021 zvizhinji zvepasi zvakanamatira muzvinhu zvakaita sekubaya nhomba kana kwete uye kana pfuti yechitatu ichidikanwa. Mwedzi mitanhatu yapfuura, hapana munhu, kana vashoma vanhu, akange anzwa nezve Delta musiyano we COVID.
Tourism nzvimbo, seHawaii, dzaive dzichikura, uye pakanga paine tariro yekuti indasitiri yekufambisa ngarava yaizomira netsoka.
Panzvimbo iyoyo, takaverenga misoro yenyaya yakadai seiyi: "Gavhuna weHawaii Anoodza moyo Kufamba kuenda kuHurumende Pakati Pakati peUptick muCOPVID-19 Mhosva" (Travel & Leisure magazine), kana Kugadzirira Hawaii Kufamba ikozvino sarudzo yehupenyu nerufu. (eTurboNews)
Uku kuwedzera kwezviitiko zvecovid kuri kuitika panguva dzakatenderedza nguva iyo iyo US (uye yakawanda yepasi) iri kusangana neyakaipisisa inflation mumakumi emakore.
Misoro yenhau dzakadai seinotevera kubva kuCNBC (Chikunguru 2021) "Kukwira kwemitengo kunokwira kumusoro kupfuura zvaitarisirwa munaJune sezvo indekisi yemitengo inokwira 5.4%" inotaura zvinotaurwa nemunhu chero upi zvake anotenga. Zvinonyanya kukosha kuti vakuru vezvekushanya vanzwisise zvinokonzerwa nekukwira kwemitengo sevanhu vakagwinya pamudyandigere vanogadzira chikamu chakakura cheindasitiri yekushanya. Ichi chikamu cheveruzhinji chinofamba kazhinji chinogara pamari yakatarwa uye inonyanya kunetseka nekukwira kwemitengo.
Rimwe dambudziko rekukanganisa indasitiri yekushanya imhosva
Semuenzaniso muchinyorwa chenhau cheBBC muna Chikunguru 7th nezvemhosva muAmerica inoti: “The New York Times akatarisa maguta makumi matatu nenomwe kuUS nedata remwedzi mitatu yekutanga yegore rino (2021), uye pazere pakave nekuwedzera kwe18% mukuponda zvichienzaniswa nenguva yakafanana muna2020. ”
Misoro yenyaya yakadaro kutenderera pasirese inoodza mwoyo kuenda kuUnited States kana miganhu yayo yavhurwa zvakare. Mhirizhonga iyi yakakanganisawo kufamba mudzimba kumaguta eUS seChicago, Portland, Oregon, Miami, Houston, San Francisco, Seattle, Washington, DC, neNew York City.
The kurwisa kuKabul airport nhasi inosimbisa chokwadi chekuti kushanya ikozvino kwatarisana nekutyisidzirwa kutsva.
Panguva ino, hapana anoziva chaizvo kuti kutora kwaTaliban kweAfghanistan kuchave kwakaipisisa pakushanya kwenyika.
Izvo zvatinoziva ndezvekuti Afghanistan ikozvino yave pasi peinenge izere kutonga kweboka remagandanga. Mutongi weTaliban pamusoro peAfghanistan makore makumi maviri apfuura akaunza nzvimbo yakachengeteka yemagandanga eAl-Qaida uye kurwisa kwakawanda kurwisa kwakakura kwezvematongerwo enyika nekushanya kwakadai seNew York World Trade Center.
Chokwadi chekuti Afghanistan parizvino inodzorwa neboka reIslam rakasimba rinoita kuti mamiriro acho asiyane zvachose nemamwe matambudziko azvino, kunyanya sekushanya kwakamboita semagineti yekurwisa hugandanga. Iko kugona kwemagandanga ari kuita kukuvadza kukuru kune indasitiri yekushanya ikozvino kwakurisa kupfuura chero nguva kubva pakurwiswa kwe9-11.
Pfupiso yekukurumidza yemamwe ematambudziko ayo kudonha kweAfghanistan kunoreva kushanya kwenyika:
Kufamba kunogona kuwedzera kuomarara uye kuve nenjodzi. Chokwadi chekuti pari zvino pane zviuru zvevanhu vasina kuvhenekwa avo vabva kuAfghanistan zvinoreva kuti pane mukana wekuti vamwe vevanhu ava vanogona kunge vari mumasero evarari uye hurumende dzichatora matanho ekuwedzera kudzamara zvave pachena kuti ndiani kufamba uye nemamiriro api.
Muganhu weUS-Mexico, watove nengozi, unozova nenjodzi yakawanda. IUnited States mukati memwedzi minomwe yapfuura yakave neyakaitika mutemo we "open-border". Un kana vasina kuongororwa vatorwa vanozopinda muUnited States kubva kune vese vane hushamwari uye vasina hushamwari nyika. Vamwe vevanhu ava vanouya nezvikonzero zvezvematongerwo enyika kana mukana wezvehupfumi. Vamwe vanogona kunge vachiuya nezvikonzero zvishoma uye kamwe muUS ivo vakasununguka kuenda chero kwavanoda. Uku kusamira kusingatungamirirwe kwekutama kwave kutokonzera kukwira kwematsotsi nezvirwere zvinosanganisira Covid.
Europe inofanirwa kutarisira kuwedzera kwevapoteri vasina kuvharwa avo vacharamba vachiita kuti Europe isanyanya kuchengetedzeka uye isanyanya kukwezva vashanyi. Mhedzisiro yacho ichave yekudzikira muhupenyu hweEuropean hupenyu uye mhando yehupenyu.
Iyo Taliban 'yechinyakare sosi yemari, zvinodhaka zvisiri pamutemo uye kunyanya kugadzirwa kwe heroine, zvichawedzera uye kuwedzera uku kunokonzeresa matambudziko kune indasitiri yekushanya. "Varimi vemaNarcotic" havachafanirwe kutya chero chinhu kunze kwemuteresi uye mhedzisiro yacho inogona kunge iri kuwedzera kukuru mukutengesa zvinodhaka (uye pamwe pabonde) kutenderera pasirese, kunyanya munyika dzekumadokero. Idzi ndidzo nyika dzinogadzira kwakawanda kushanya kwenyika.
Kubviswa kamwe kamwe kweUnited States kubva kuAfghanistan nekushaikwa kwayo kwekubatana pamwe nevatsigiri vayo veNATO kungangoita kuti hutongi hweNATO hushaiswe simba panguva chaiyo apo kushanya kungatarisana nekutyisidzirwa kwehugandanga. Iyo indasitiri yekushanya iri kuzoda kushanda pamwe uye pamwe neakawanda masangano ehurumende kurwisa chero kutyisidzira kutsva kwehugandanga kana mhosva dzakarongeka.
Izvo izvo izvozvi maChinese anoona isina kusimba America inogona kukurudzira kurwiswa kweTaiwan kana zvimwe zvikamu zveSouth China gungwa. Aya matanho ekusagadzikana anogona kungokuvadza kudzoreredza kwekushanya pamwe chete neAsia Pacific rim uye nekumaodzanyemba kweAsia nyika Tourism munzvimbo ino inogona kuzadzwa chose nemaChinese uye nyika dzakaita seNorth Korea dzinogona kushinga kuita nenzira isina hanya. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti yakawanda yepasi nhumbi inoenda nengarava uye kurwiswa pamigwagwa mikuru yegungwa kunogona kukonzera kuwedzera mitengo yekutakura.
Kuwa kweKabul ndiko kumutsa-kusimudzira kwevatariri vekushanya. Ino haisi yenguva yekudzora kumashure kwekuchengetedzwa kwekushanya asi pane kuronga kwenguva ingangoita yakaoma.
Vatungamiriri vezvekushanya vanofanirwa kushanda nehurumende dzavo, vanoita zvekuchengetedzwa kwemitemo, pamwe nemashumiro avo ezvehutano kuti vagadzire mamiriro ekuwedzera indasitiri yekushanya uye kuchengetedzeka nekuchengetedzeka kukuru.
Idzi dzinenge dzisiri nguva dzakareruka, asi indasitiri yekushanyirwa iripo kuti irarame inofanira kutarisana nezvinoitika, inofanirwa kugadzirira zvakaipa, asi panguva imwe chete namatira zvakanaka uye shanda kuunza vanhu pamwechete.
Nezve World Tourism Network (WTN)
WTN ndiro izwi rekare-risingapfuure rezvidiki uye zvepakati-saizi yekufamba uye mabhizinesi ekushanya kutenderera pasirese. Nekubatanidza kuyedza kwedu, tinounza kumberi izvo zvido nezvishuwo zvemabhizinesi madiki nepakati nepakati nevabatiri vavo.
Nekuunza pamwechete zvakavanzika uye neruzhinji chikamu chevamiriri pamapuratifomu uye epasirese mapuratifomu, WTN kwete chete inotsigira nhengo dzayo asi inovapa ivo izwi kumisangano mikuru yekushanya. WTN inopa mikana uye yakakosha network kune nhengo dzayo pari zvino nyika zana negumi nesere.
Mamwe ruzivo nezve nhengo uye zviitiko enda www.wtn.travel
Chiremba Peter E. Tarlow
Dr. Peter E. Tarlow mutauri ane mukurumbira pasi rose uye hunyanzvi anoongorora kukanganisa kwematsotsi nehugandanga paindasitiri yekushanya, zviitiko uye manejimendi njodzi yekushanya, uye kushanya nekusimudzira hupfumi. Kubva 1990, Tarlow anga achibatsira nharaunda yekushanya nenyaya dzakadai sekuchengetedzwa kwekufamba uye kuchengetedzeka, kusimudzira hupfumi, kushambadzira kwekugadzira, uye kufunga kwekugadzira.
Semunyori anozivikanwa mumunda wekuchengetedzwa kwekushanya, Tarlow munyori anobatsira kumabhuku mazhinji ezvekuchengetedzwa kwekushanya, uye anoburitsa akawanda ezvidzidzo uye akashandisa zvinyorwa zvekutsvaga zvine chekuita nenyaya dzekuchengetedza kusanganisira zvinyorwa zvakaburitswa muThe Futurist, iyo Journal of Travel Research uye Security Management. Zvikamu zvakasiyana zveTarlow zvehunyanzvi uye zvehunyanzvi zvinyorwa zvinosanganisira zvinyorwa pazvinhu zvakaita se: "rima kushanya", dzidziso dzehugandanga, nekusimudzira hupfumi kuburikidza nekushanya, chitendero uye hugandanga uye kushanya kwekushanya. Tarlow anonyora zvakare uye anoburitsa inozivikanwa pa-line tsamba yekushanyirwa yeTourism Tidbits inoverengwa nezviuru zvevashanyi uye vezvekufamba kutenderera pasirese muzvinyorwa zveChirungu, Spanish, uye Portuguese.
Iyo Yakanakisa Nhumbi Dzokurwisa COVID-19 Delta Mhando
Sharm El-Sheikh, Luxor uye Cairo nendege kuQatar ...